Dagaal Cirka iyo dhulka ah oo lagu qaaday degmada Janaale Iyo Wararkii ugu dambeeyay | KALSHAALE
Dagaal Cirka iyo dhulka ah oo lagu qaaday degmada Janaale Iyo Wararkii ugu dambeeyay
Feb 11, 2019 - 16 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Wararka ka imaanaya degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in xalay halkaasi uu ka dhacay weerar khasaaro geystay oo lala eegtay Saldhig ciidamada Alshabaab ku leeyihiin Degmada Janaale.
-MA RUNBAA INAY SOMALIA & XISBIGA WADDANI ISU OLOLAAN?-
SOMALIA & Xisbiga WADDANI waxay ka midaysanyihiin iney yihiin HAL ummad . *Bùdiba hadday taatahay WAXAA haray sidii loo geed qaadi lahaa dariiqii midnimo. *Dhab ahaantii waxay degaannada Waqooyi Galbeed ay yeesheen waji jadiida WAXAANA isbedelay miisaanki siyaasadeed iyo awoodeed ee Gobolladaa Waqooyi Galbeed SABABTA oo ah Khaatumo State of Somaliya oo MADI ahayd ayyaa heshay mattaan ay isku aragti, Damaq & ujeedo dhaba yihiin oo leh waayo aragnimo siyaasadeed. *Qodobada quwaddaan saldhigga looga dhigay WAA kuwaan;
1.Waxay caddeeyeen ula jeedadooda Midnimo Somali.
2.Inay helaan TIRADA ugu badan ee shacabka Gobollada Waqooyi Galbeed ayyagoo adeegsana Warbaahinta & Saxiibkaa dhegta ugu sheeg.
3.Awooddaan jadiidka waxay goosatay inaysan Dawladda Somalia xiriir toosa la yeelan ilaa ay ka helaan reer Waqooyi midaysan.
***Awooddaan maalin kasta sii ballaaranaysa Waxay si sahala u Tirtirtay damaqi Qabiil Maadaama ay maalin kasta ku soo biirayaan beelo kala abtirsiina; Isaaq, dhulbahante, warsangeli, Gadabuursi & Beelaha degaannadaa looga badanyahay. *Maamulkii Muuse Bixi wuxuu WAAYAY cid uu shacabka farta ugu fiiqo KALSOONIDI ciidankina wey yaraatay Maadaama ay saraakiil badani ka goosteen MARKAASAY masùuuliyiinti ku hareeraysnayd kula taliyeen Muuse inuu Waddankiisi 2baad Jabuuti aado Warbaahintana ku dhaho “usbuuc baan Jabuuti ku soo nasan” isna waa ka yeelay. *Madaxdi kale ee maamulkii Muuse Biixi oo wada jira waxay warbaahinta ka sheegeen inay hayàdaha; Militeriga, Boliska, Nabadsugidda & kuwa kalaba ay ammaanka magaalooyinka ay gacan bira ku qabtaan Dabadeedna lagu heeso WAABAA BERYAY. ***Madinimo igu kooban. WBT
Axmed somali asc.
Adeer golaha maad ka xishootid. Qoraalkaan belaa xigmada ah eed asbuuca kusoo celcelineysid. Hadii dadku rabaan. Aragti ayey ka dhiiban lahayeen.
Xitaa caruurtu sidaan. wax uma qorto. Qof weyn iska daaye.
===Afeef, horta anigu ma sheegan Caqli & Aqoon midna ee WAXAAN sheegtay Waaya aragnimo oo aan isbarbar dhigi karo TAAN maanta Taagan & TII aan arkijiray oo ila qumanayd!!!.
*Islaamey, beesha Isaaq wey dayacantahay MARKA waxay u baahantahay hiil & badbaado. ***Markaan anigu isla weynahay waxyaaba badan baa iga hoos-bixi WAANA tan manta haysata madaxda maamulka beesha Isaaq. *haddaan saa ku dayno wey sii lumi Marka waa in layiraah WAR hooy sidaa ma aha ee ka jooga. *Ma jirto cid isu tagtay ee ku heshiisay in la takooro Isaaq Haddii kale Ahmed Somali baa la safan lahaa. *Jaah wareerka siyaasadeed ee beeshaa haysata waxaa caddayn u ah BAL dhageysta wuxuu ku hadlay aqoonyahanki ay soo doorteen Xuseen Bulxan. *Mar la yiri Beelaha Waqooyi iskuma raacsana Mowqifka beesha Isaaq WUXUU ku jawaabay; “annagu annagaa soo dhammaysanayna teenne aan marka hore dhammaysanno annaga (Isaaq) & idinku (Somali)”. *Waa aan madaxa ku socono ISMA weydiin yaa heshiiska lala geli MA beesha Isaaq MISE beelaha Waqooyi, isma weydiin inay beelahaa kale & Iyyagu heshiinkaraan Maadama aysan beelaha kale raally ka ahayn goosasho ee AY taaganyihiin Reer Waqooyi ahaan aan reer Koofur ula xisaabtanno WAANA tan ugu fiican uguna faaìdo badan. *Aragtidayda horaan u sheegay MIDNIMO reer Wqooyi ay garwadayn ka yihiin GARXAJIS & DHULBAHANTE. WBT
Garqaad, adeer horta waan ku salaamay. *Adeer seen yeelaa DERBI baa noo dhexeeye ADIGU waxaad ku jirtaa ANNAGA fiican reer hebelna XUN anna waxaan ku jiraa sideeba Somali midaysan loo helaye. WBT
Adeer waxaad qoreyso maaha wixii dadka isu kenaayay. Ee wixii kala fogeynaayay.
Waxaan arkaayay meel aad ku qortay. Galmudug iyo Somaliland wey siman yihiin. Ood kusii indha cadahay. In ay maamulada koofureed ee qabiilka ahi ay sharci ku dhisan yihiin. Laakiin somalalnd ay sharci darro ku dhisan tahay.
Adiga oo sidaas u hadlaa in aad dad kale ku sheegto in uu derbi xiro. Adigana free tahay. Waa arin ugub ah.
Adeer indhaha hees tirin. Koofur waxaan hawiye rabin. Kama socon karaan. Woqooyina waxaan Reer sheekh isxaaq rabin kama socon karaan.
Dalku waa woqooyi iyo koofur xamar iyo hargeysa. Dadkuna labadaas meel unbeey ku qasban yihiin in ay kala racaan.
Asc. Mudane Garqaad salaan Sare guddoon . Sxb intaa waad igala fiiradheereyd.
1) Koonfur Hawiye !
2) Waqooyi Isxaaq !
Qawlkaas ayaa kasoo baxay afka iyo qalbiga qof Soomaali sax ah way iga daadagiweyday . Soomaali hadey dooneyso qaran guud oo loo dhanyahay ma jiro qabiil HALTAAKO dheer qabiil kale. Qabaa’illada sida goonida ah isu abaabuley ee kusoo caanamaalay waan ku amaanayaa. Lkn aayahooda waa wax kasii balaaran , kana sii wanaagsan waxa ay hadda haystaan = Qaran guud oo Soomaaliyeed . Cidkastoo aan sidaasi u fikirin way qasaaridoontaa = aka BASAL .
Koonfur iyo Waqooyiba waxaa ka talinkara waxna laga weydiinayaa cidda haysata CODKA shacabka Soomaaliyeed. Inta laga gaarayo heerkaas TUUGGII ugu awood weyn tuugada ha nagu HABSADO.
Taageero uma haya adeerkeyga tuugga iyo dabadhilifka ah , ee maxaad ka tiri kaaga?
Jawaab qadimaad ah : Si kastood u taageerto adeerkaaga YURTA ah , anigu waligey ma taageerayo adeerkeyga YURTA ah!
C/ raxmaan asc macalin.
Wexey ugu daran tahay waxaad rag iskaga riixdo hadeey macalimiintu qoonsadaan.
War anigu hadalkaas waxaan dhahaa markaan rabo in aan wax fowdeeyo ama qolo qabyaaladda ku indhacad hadana dhexdhexaad iska dhigeyso aan arko sida adeer axmed aka jirjiroole.
Aragtideyda dhabta ah. Sidaan.Ma jiro qabiil. Qabiil kale ka fiican. Dadka somaliyeed meel kasto ha jogaane waa isku mid. Bari. Xamar hargeysa jigjiga beledweyn gaarisa. Baay iyo bakool anigaa iska leh. Sow anigaan baqay.
Iloowse macalin hadaan adiga ku weydiiyo. Xamar iyo hargeysa waa caasimadii kubaad iyo labaad. Dadku hadeey labadaas adaan mexeey dhibaato leedahay? Maxaad qoonsatay? Ma hadalka sidaan u dhahay ayaa diiday? Xamar iyo hargeysa miyaadan qodaada ka laheyn? Macalin. Faraa kugu godan.
Adeer waa ku salaamay..
Maalin dhaweyd waxaad arakayey adiga oo in mucaaradka dowladda igu dartay.. anigoo ujeedadaydu meel kale u socotay oo ah Somalia mardambe shaqsi in dhulka la gelin oo waxa nagu dhacay markale nagu dhicin..
Waxaan u baahanahay dowladda shacabka u taliyaan oo marka u bogi waayaan iska tuuri karaan.
Wax Farmaajo iyo Khayre ku kooban maaha, waxay qusaysaa kulli madaxda ka dambayn doonta.
Dowlad fuck off ku dhahno ayaan rabaa ee dowlad naga adag oo godka Jilicow haldoorka bulshada ku xiniinyo siiba ma rabno ama dila.
you get it.. cappiche,!
Wax hubso, Ahmed Somali hadal culus ayuu meesha soo dhigay oo hadaad aqligaaga la kaashato meesha kujira.
Waxaan wada ognahay in Dhulbahante, Warsangeli, Gadubiirsay, Ciise iyo beelo kale goosasho rabin oo midnimo Somali rabaan, laakiin maanta duruuf ayaa jirta.
Hadda Garxajis, gaar ahaan Habaryonis ayaa liiska soo gashay oo Somaliland gooni u taagan bar diidan yihiin, qaarkood xanaaq iyo talada noodhiiba wadaan laakiin way jiraan kuwo runtay ka Somaliland jeegaanta nagu caburiso waxaa noodhaama Somaliweyn.
Hadalkiisa meesha u socda kama fekerin ee odaga weerar iyo maxaad qabyaaliste u noqon wayday adoo Hawiye ah, weerarkaaga saas ayaan u arkay.
Fikirkaaga dhiibo oo Adeer Ahmed Somali fikirkiisa xor buu u yahay.
Ma afka ayaa la isku dhegayaa.?
Hadalka axmed somali. Mecno weyni kuma jiran. Wayoo wuxuu rabaa Reer woqooyi in ay noqdaan sida Reer koofurka oo kale. Qabiilka kasto madaxweyne iyo meel yar oo la isku soo xiro. War miyeysan waaya aragnimo noogu filneyn kala qodqadnaanta koofur taalo maxaan dad kale ula jeclanaa.
Midda kale dhulos warsan geli samaroon. Intaba cidi xooga kuma haysato ee iyaga ayaa kala qeybsan qolo wexey aaminsan tahay somaliweyn qolada kalena Somaliland. Hadana sidaas oo ay tahay waxaa awood badan qolada aaminsan Somaliland. Waxaan sidaas u leeyahay hadii ay intooda badan somaliweyn aaminaan yihiin. Wax uun saameyn ah ayey yeelan lahayeen.
Ninka tukaraq ilaa xuduudka jabuuti iyo itoobiya inta dhexeyso warkiisu ka fulo. Wexey ila tahay in lagu daysado. Lalana xaaltamo intii aan ka fikiri laheyn kala qeybintiisa.
In aan Somaliland xagxagano. Waxaa ka horeyso in aan qaadno xuduudka gaalkacyo yaal.
IIDHEH KASOO QAAD.
ALSHABAB,ISIS WAA MARAYKAN.
MARAYKANA WAA ALSHABAB,ISIS.
ISIS=ISRAELI SECRET INTELLIGENCE SERVICES.(ALMASHRUCUL ALYUHUDIYAH)
Garqaad mudane waan ku fahmay . Farta kuutaagan waxba kama dhihikara ,
waqtigaase cadeyndoona . Xamar iyo Hargeysa maadan dhihin ee waxaad tiri Hawiye iyo Isaaq . Aniguna shaqsiyan diyaar uma ahi inaan ku abtirsado Soomaali ku dabafeylsan reer aakhiraad aka. Hawiye , Daarood , Isaaq ect . Sxb fadlan anigoo og inaad tahay Somali isku kalsoon , hadana waxaan kaa codsanayaa inaad qofka aad KU qanciweyda qoraalkiisa aad su’aal ka weydiisa ERAGYA kugu socon la’ . Isla qofkii qoray qoraalka ayaa looga fadhiyaa jawaabta. Wali hadaad ku qanciweyda ku celi / si Kale u weydii . Qiil badana u raadi.
Dadka dhexdhexaadka ah marka la boobayo gurigooda miyey iska aamusayaan k.k.k.k.Kaftan.com.
Dadka dhexdhexaadka ah marka la bobaayo gurigooda miyey iska aamusayaan.
Kkkkkkkkkk. Waan iibsaday.
Macalin. Waa sidaad sheegtay. Kaftanku waa halkaasa. Laakiin aniga agtaada iga fiiri.
Garqaad k.k.k. mahadsanid walaal qiimo badan , garabkaaga iga day .
Kulli waan idin salaanay gaar ahaan C/Raxman.
Garqaad waa ogtahay in Somaliland iyo Somali kale midna kala qaybsanaantooda iyo dhib la rabin.
waxaa laga hadlay dooda meesha taal.
Aan heshiino ma xuma ee waa in wax ku heshiino.
Galkacyo dadka maalinta is aaminaan oo wax isku darsadaan hala gaaro.. Hadda ku madhquuli maayo.
in amar Xamar laga soo bixiyey oo dadka dhulka degen wax laga waydiin weliyey raaci maayo, waayo waa dictatornimo
Adiga warkaaga waxaan u fahmay; Somalia waa Isaaq iyo Hawiye wax laga waydiiyaa oo sheeko gobolaysi, Puntland, Jubbaland meesha ka baxdaa.
waa in Xamar iyo Hargeysa wada hadlaan….
Taas wax kama qabo ogeyn laakiin in tuulaydaya la igu tinto wallay mardambe u dhacayn.
Marka in wax igu darsato hadaad rabto sow in anigana talada la igu daro maaha.
meesha yaa isbaryaya! Tuuladaada aan kuugu taliyo dhimatay.. warkaas anaa kuu haya..
Reer Hargeysa ha isku taliyeen yaa diiday?
Garqaad adeer, waxaa tiri; “Hadalka Ahmed Somali mecno weyni kuma jiran. Wayoo wuxuu rabaa Reer woqooyi in ay noqdaan sida Reer koofurka oo kale”. ***Garqaad waxaan kuu bixiyay NABIIB sababta oo wax iga xaaraana ayyaad igu tuurta. *Inaan siyaasad kala hadlana waa habeenki xalay oo tegay SABABTA oo ah qaangaar uma tihid. WBT